သငျသညျအကြှနျုပျတို့သညျစစျဆေးကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြကြောင်းသည်အခြားအရည်များလုပ်နေဖို့အပြင်တစ်ဦးကိုအသုံးပြုကားတစ်စီးကိုဝယ်ယူနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျကိုလည်းမော်တော်ယာဉ်ဘရိတ်စစျဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်. တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်ပေါ်ဘရိတ်ထွက်ဝတ်ဆင်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကြသည်တစ်ချက်ရှိပါတယ်. It is the friction between the rotor and the pads that stop the […]
Tags: ဘရိတ်စစ်ဆေးနေ, မော်တော်ယာဉ်သမိုင်းကိုအစီရင်ခံစာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်ပို့စ်တွင်ကျွန်တော် crank ကိစ္စတွင်အင်ဂျင်ကရေနံကိုဖုံးအုပျ, ဘယ်လိုစစျဆေးဖို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကြည့်ရှုပါရန်. ဒီ post မှာတော့ကျနော်တို့ဂီယာအရည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ဘို့ကြည့်ဖို့စစ်ဆေးနေကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်. အင်ဂျင်ကရေနံဘေးတွင်, ဂီယာရေနံဖြစ်ကောင်းလာမည့်အရေးအပါဆုံးဖြစ်ပါတယ်အရည်. It is vital for automatic transmissions to have the […]
Tags: ဂီယာစစ်ဆေးနေ, စစ်ဆေးနေဂီယာအရည်, မော်တော်ယာဉ်အခွအေနေအစီရင်ခံစာ
တစ်ဦးကိုအသုံးပြုမော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့စိတ်ညစ်စရာအလုပ်တခုကိုရှိနိုင်ပါသည်. There areafew things that you can check yourself to ensure that you are gettingagood vehicle and good quality. One of the most important things you need to check when buyingaused vehicle is the engine crank case oil. In this post […]